Ubukrelekrele bobugcisa (AI) kunye noHlaziyo lweNtengiso yeDijithali | Martech Zone
Ubukrelekrele bobugcisa (AI) kunye noHlaziyo lweNtengiso yeDijithali
NgoLwesibini, Septemba 28, 2021 NgoLwesibini, Septemba 28, 2021 Isaja Karadovska
Ukuthengisa kwidijithali sisiseko sayo yonke into ushishino lwe-ecommerce. Isetyenziselwa ukuzisa ukuthengisa, ukwandisa ulwazi lwebrand, kunye nokufikelela kubathengi abatsha.
Nangona kunjalo, intengiso yanamhlanje igcwele, kwaye amashishini e-ecommerce kufuneka asebenze nzima ukoyisa ukhuphiswano. Ayisiyiyo loo nto-ikwagcina umkhondo wetekhnoloji yakutshanje kunye nokuphumeza iindlela zokuthengisa ngokufanelekileyo.
Enye yezinto ezintsha zetekhnoloji ezinokuguqula ukuthengisa kwidijithali kukubhadla okungeyonyani (AI). Makhe sibone ukuba njani.
Imicimbi ebalulekileyo ngeeNdawo zokuThengisa zale mihla
Okwangoku, ukuthengisa kwidijithali kubonakala ngokuthe ngqo. Amashishini e-ecommerce anokuqesha umthengisi okanye enze iqela eliza kulawula uthungelwano lwasentlalweni, ukuphatha iintengiso ezihlawulelweyo, ukuqesha abachaphazeli, kunye nokujongana nolunye unyuselo. Okwangoku, imiba emininzi ebalulekileyo ivela ekubeni iivenkile ze-ecommerce zinengxaki nazo.
Amashishini aphosa indlela yokuThengwa kwabaThengi -Ukujolisa kubathengi kuya kuba yinjongo yeshishini ngalinye. Okwangoku, uninzi lwabanini bamashishini bayayidlulisa le ngcamango kwaye bahlala begxile kubo, kwi-ROI yabo, nakwiimveliso zabo. Ngenxa yoko, ukwenziwa komntu kubathengi kuhlala kungacacanga, kwaye iinkampani zihlala zigqiba ekubeni zijongane nazo kamva. Ngelishwa, le mpazamo enkulu. Kwihlabathi lanamhlanje, abathengi bayazi ukuba bafanele kangakanani kwaye abakuthandi ukuphathwa njengeebhanki zehagu. Ngaphandle kwendlela ejolise kubathengi, amashishini ayaphoswa ekwenzeni isiseko esinyanisekileyo sabathengi kunye nokufumana ukhuphiswano kumncintiswano.
Kukho iingxaki ngeDatha enkulu -Abanini bevenkile ye-ecommerce bayazi ukuba kubaluleke kangakanani ukuqokelela idatha malunga nabathengi ngokubhekisele kwimikhankaso yentengiso eyimpumelelo. Ukuqokelela idatha yabathengi kuphucula amava abathengi kwaye, ngenxa yoko, yonyusa ingeniso. Ngelishwa, amashishini ahlala ejongene nemiceli mngeni yokuhlalutya idatha. Oku kubenza baphoswe lulwazi olubalulekileyo olunokubanceda baphathe Ukuthengisa ngokuziphatha.
Ngamazwi omcebisi waseMelika kunye nombhali uGeoffrey Moore:
Ngaphandle kwedatha enkulu, iinkampani ziyimfama kwaye azizizithulu, zizula ziphume kwiwebhu njengexhama kuhola wendlela.
UGeoffrey Moore, ukuThengisa kunye nokuThengisa iiMveliso eziPhazamisayo kubaThengi abaPhambili
Imiba yokuDala uMxholo iyinyani -Iinyani zihlala zikhona ukuba akukho ntengiso yedijithali ngaphandle komxholo. Umxholo ubalulekile ekuphuculeni ulwazi lwebrand, ukukhulisa inqanaba, kunye nokwenza umdla. Umxholo osetyenziswa kakhulu kwintengiso yedijithali kubandakanya iiposti zebhlog, amanqaku, uhlaziyo lwentlalo, ii-tweets, iividiyo, imiboniso kunye nee-ebook. Okwangoku, ngamanye amaxesha amashishini awazi ukuba ngowuphi umxholo onokuzisa ezona zibonelelo. Bazabalazela ukuhlalutya abasabela ekujoliswe kubo kwinto ababelana ngayo kwaye banokuzama ukuyigubungela yonke into endaweni yokuhlala begxile kokufanelekileyo.
Iintengiso ezihlawulelweyo azisoloko ziqondile Abanye babanini beevenkile ze-ecommerce bahlala bekholelwa ukuba kuba sele benayo ivenkile, abantu baya kuza, kodwa bahlala bethengisa. Ke ngoko, bacinga ukuba iintengiso ezihlawulelweyo yindlela ekhuselekileyo yokutsala abathengi ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, abathengisi kufuneka bahlale becinga ngeendlela ezintsha zokuphucula iintengiso ukuba bafuna ukwenza oku ngempumelelo. Enye into ekufuneka uyiqwalasele liphepha lokufika. Iziphumo ezilungileyo zentengiso, amaphepha okufika kufuneka afomathiwe ngokufanelekileyo kwaye asebenze kuzo zonke izixhobo. Okwangoku, amashishini amaninzi athatha isigqibo sokusebenzisa iphepha labo lasekhaya njengephepha lokufika, kodwa ayisosona sisombululo sisiso.
Ukulungiswa kwe-imeyile engalunganga -Enye yeendlela eziphambili zokuthengisa iimveliso kubandakanya ukuthengisa nge-imeyile. Ngayo, amashishini e-ecommerce angaya ngqo kumthengi kwaye abe namazinga aphezulu okuguqula. Ii-imeyile zikwaphucula ubudlelwane kunye nezikhokelo kwaye zinokusetyenziselwa abathengi bexesha elizayo, abakhoyo nabangaphambili.
Ngelishwa, inqanaba lokuvula le-imeyile ngamanye amaxesha liphantsi kakhulu. Kakhulu kangangokuba iqondo lokuvula eliqhelekileyo lokuthengisa li malunga ne-13% kuphela. Okufanayo kuya kwinqanaba lokucofa. Umndilili we-imeyile we-CTR kuwo onke amashishini yi-2.65%, echaphazela kakhulu ukuthengisa.
UkuqalaBonsai, Ubalo lweNtengiso ye-imeyile
Ezona ndlela zokuziphatha zibalaseleyo ngezisombululo ze-AI Ngethamsanqa, itekhnoloji yanamhlanje ingasetyenziswa kwintengiso yedijithali ukulungisa phantse yonke imiba echazwe apha ngasentla. I-AI kunye nokufunda ngomatshini kunokusetyenziswa ngeendlela ezininzi zokuphucula ukwenziwa komntu, ukusebenza kunye nokudalwa komxholo. Nantsi indlela.
I-AI yoBuntu obungcono -Omashishini e-ecommerce agcina umkhondo weendlela zamva nje ayazi ukuba i-AI inokusetyenziselwa ukuphucula ukuzenzela ngokukhawuleza nje ukuba umthengi awele kwiphepha. Ayingabo bonke abasebenzisi abafanayo, kwaye nge-AI, iimveliso zinokwenza oku kulandelayo:
Bonisa umxholo owenziwe ngokobuqu kwizixhobo zonke
Nika imveliso okanye inkonzo esekwe kwindawo
Nika iingcebiso ngokusekwe kuphando lwangaphambili kunye namagama aphambili
Guqula umxholo wewebhusayithi ngokusekwe kwindwendwe
Sebenzisa i-AI kuhlalutyo lweemvakalelo
Owona mzekelo ubalaseleyo wentengiso ye-ecommerce ngu I-Amazon Yenza umntu, evumela abaphuhlisi ukuba benze iiapps basebenzise itekhnoloji yokufunda ngomatshini njengeAmazon.
Izixhobo ezinamandla zoVavanyo lweDatha oluKhulu -Ukuze wenze isicwangciso esijolise kubathengi, amashishini kufuneka asebenze ekuqokeleleni, ekuhlalutyeni nasekucoceni ulwazi olusebenzayo lwabathengi. Nge-AI, ukuqokelelwa kwedatha kunye nohlalutyo kunokuba ngqo ngakumbi. Umzekelo, isixhobo esifanelekileyo se-AI sinokumisela ukuba loluphi uhlobo lweemveliso ezithengwa kakhulu, ngawaphi amaphepha ajongwa kakhulu, kwaye afanayo. I-AI inokulandelela lonke uhambo lwabathengi kwaye inike isisombululo esifanelekileyo sokuphucula ukuthengisa. Umzekelo, ngeGoogle Analytics, abathengisi banokujonga indlela yokuziphatha kwabathengi kwiwebhusayithi.
Amaqonga e-AI e-Intanethi oDalo loMxholo -I-AI ingasombulula le micimbi mibini ixhaphakileyo enomxholo-ukukhawulezisa ukudalwa komxholo kunye nokuhlalutya ukuphendula kwabathengi kumxholo. Xa kuziwa ekudalweni komxholo, kukho izixhobo ezininzi ze-AI ezikhoyo kwi-Intanethi ukunceda abathengisi ukuba beze nemifanekiso enophawu lwezithuba zentlalo, iintloko zamanqaku, okanye babhale iposti yebhlog okanye benze ividiyo yokwazisa. Kwelinye icala, isoftware enikwe amandla yi-AI inokunceda abathengisi ukuba bahlalutye ngaphezulu nje kokubalwa kwabantu. Iyakwazi ukubeka esweni indlela yokuziphatha kwabathengi kunye nokuzibandakanya kumajelo asekuhlaleni. Abanye imizekelo ibandakanya uHlumelo lweNtlalo, Cortex, Linkfluence Radarly, njalo njalo.
I-AI inokwenza lula ukuKhuthazwa kwi-Intanethi Okwangoku, u-Facebook kunye namanye amaqonga amaninzi abonelela ngezixhobo ze-AI ukunceda abathengisi ukuba baphathe iintengiso zabo ngokulula. Oko kuthetha ukuba iintengiso azizukuchitha. Kwelinye icala, abathengisi banokufikelela kuzo zonke iintlobo zolwazi ezenza ukuba ukwenziwa kwentengiso kube lula. Kwelinye icala, I-Facebook isebenzisa i-AI ukuhambisa ezo ntengiso ngqo kubantu ekujoliswe kubo. Ukongeza, iphepha lokufika lidlala indima ebalulekileyo ngaphandle kweentengiso. Ukuyila elona phepha lifanelekileyo lokufika kunokwenza umahluko omkhulu. I-AI inokunceda ngezinto ezimbini ezibalulekileyo kwiphepha elimangalisayo lokufika—ubuntu kunye noyilo.
I-AI yolungiselelo lwe-imeyile -Kuba ukuthengisa nge-imeyile kubalulekile kumashishini akwi-Intanethi, i-AI inokuyiphucula indlela ezenziwa ngayo ii-imeyile. Yintoni egqithisile, I-AI inokusetyenziselwa ukuthumela ii-imeyile ezisemgangathweni kunye nokonyusa ingeniso ngelixa zisetyenziselwa iindleko. Okwangoku, izixhobo ezinikwe amandla yi-AI zinoku:
Bhala imigca yesifundo se-imeyile
Thumela ii-imeyile ezizezakho
Phucula imikhankaso ye-imeyile
ukwandisa ukuthumela amaxesha nge-imeyile
Hlela uluhlu lwee-imeyile
Olu sebenziso lunokunyusa ukuvulwa kunye nokucofa amaxabiso kwaye kukhokelele kwintengiso engaphezulu. Ukongeza, ii-chatbots ze-AI zinokusetyenziselwa ukuthumela imiyalezo ii -apps, ukuxhasa imikhankaso ye-imeyile, kunye nokuhambisa amava okugqibela.
Intengiso yedijithali yinxalenye ebalulekileyo yempumelelo yeshishini ngalinye. Okwangoku, iivenkile ze-ecommerce zinokhuphiswano ngakumbi nangakumbi lokubetha, kwaye kuloo ndlela, abathengisi banokujongana nemiceli mngeni eliqela. Umzekelo, ukwenza umxholo kunokuba nzima, kwaye ukujongana nedatha enkulu kunokubonakala kungenakwenzeka.
Ngethamsanqa, namhlanje, izixhobo ezininzi ezixhotyiswe nge-AI phaya zinceda abathengisi ukuba baphucule amaphulo abo kwaye amashishini avelise ingeniso. Ukusuka kwii-imeyile eziphuculweyo ukuya kunyuselo olulula kwi-Intanethi, i-AI inamandla okutshintsha ukuba kwenziwa njani intengiso yedijithali. Eyona nto ilungileyo ngayo-kukucofa nje okumbalwa.
Ukwazisa: Martech Zone unekhonkco lokudibana neAmazon kweli nqaku.
tags: aiIincoko ze-aiimizekelo ye-aiIqonga le-aiizisombululoIzixhobo ze-aiAmazon yenza ngokwakhokukubhadla okungeyonyaniidatha enkuluUhlalutyo olukhulu lwedathaUlwaziso lwebrandxubusha i botscofa amaxabisoukudalwa komxholoumthengi ophakathiukuthengiswa kwedathaimeyile ctrizibalo zentengiso ye-imeyileUkulungiswa kwe-imeyileI-Facebook aiUGeoffrey mooreezintshaukunyuselwa kwi-intanethiamazinga avulekileyoiintengiso ezihlawulwayoNgokwezifisoPPCzenqanaba seoqalisa
UIsaja Karadakovska uphumelele kwiPol-Sci, owayesakuba nguMphandi weJunior, kwaye okwangoku Thatha i -umbumbumbulu's Umququzeleli woMxholo. Uqhutywa kukufuna kunye nokwenza umxholo omkhulu. Ixesha lakhe lasimahla linikezelwe kukuthanda kwakhe izityalo.
Ulandela njani ukungeniswa kweFom Elementor kwiiMeko zikaGoogle zoHlalutyo usebenzisa iJQuery
Imbuyekezo kutyalo-mali (i-ROI) yamaQonga okuZenzekelayo okuThengisa